China COVID-19 Neutralizing Antibody Detection Kit ndị na-emepụta ihe na ndị na - eweta ya Yinye
COVID-19 Antigen Nchọpụta ...
One-Nzọụkwụ mmamịrị Multi-Test K ...
COVID-19 Mgbochi / Antigen ...
COVID-19 / Influenza A / Na ...
COVID-19 Nnọchi Nchọpụta Antibody
Nhazi ọkwa: Na-Vitro-Diagnosis
Ngwaahịa a na-eji chromatographic immunoassay na-aga n'ihu maka nchọpụta qualitative nke na-egbochi ọgwụ nje na ọbara mmadụ, plasma, ma ọ bụ ọbara zuru oke site n'aka ndị natara ọgwụ mgbochi ma ọ bụ ndị agbakeela site na COVIV-19.
Akwụkwọ ọgụgụ coronaviruses dị na us genus. COVID-19 bụ ọrịa na-efe efe nke na-efe efe nke ukwuu. Ndị mmadụ na-adịkarị mfe. Ka ọ dị ugbu a, ndị ọrịa bu ọrịa a na-ebute site na coronavirus bụ isi ihe na-ebute ọrịa; ndị na-ebute nje virus dị ka asymptomatic nwekwara ike ịbụ isi mmalite. Dabere na nchọpụta epidemiological dị ugbu a, oge mkpuchi bụ 1 ruo ụbọchị 14, ọkachasị ụbọchị 3 ruo ụbọchị 7. Ihe ngosipụta ndị bụ isi gụnyere ahụ ọkụ, ike ọgwụgwụ na ụkwara akọrọ. A na-ahụkwa mkpọchi imi, imi na-agba, akpịrị akpịrị, myalgia na afọ ọsịsa na ụfọdụ.
SARS-CoV-2 na-egbochi ihe ndị na-alụso ọrịa ọgụ bụ ihe nchebe na-echebe nke mepụtara ahụ mmadụ mgbe ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa ma ọ bụ ọrịa nje. Ngwa a na - eji onye na - anabata ACE2 iji sọ mpi jikọtara ya na nje anti-S-RBD nke nwere nje na - egbochi nje. O adabara ka ịchọpụta dịghịzi mmetụta mgbe ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa ma ọ bụ malitere ịrịa ọrịa. Ihe nyocha a nwere: 1) pad conjugate na-acha ọcha burgundy nwere SARS-COV-2 S-RBD antigen jikọtara ya na colloid gold na òké IgG-gold conjugates, 2) akwa nitrocellulose membrane nke nwere akara ule (akara T) na akara njikwa (C akara). Ejiri akara ACE2 kpuchie eriri T ahụ. The C akara bụ tupu-ntekwasa na ewu mgbochi òké IgG. Mgbe a na-akụba ụda olu zuru oke n'ime oghere ntinye ihe nlele na kaadị nnwale, ihe atụ ahụ na-akwagharị site na ọrụ okpu gafee warara. Ọ bụrụ na ndị na-emegide nje na-adị na ụdị ahụ, ha ga-ekekọta antigen S-RBD na ọla edo colloid, ma gbochie ebe njikọ nke ndị nabatara ACE2. Yabụ, warara ga-ebelata agba agba na akara T ma ọ bụ ọbụlagodi enweghị akara T. Ọ bụrụ na ụdị ahụ enweghị ọgwụ mgbochi na-anọpụ iche, antigen S-RBD na ọla edo na-acha odo odo ga-ejikọta ndị na-anabata ACE2 nwere oke arụmọrụ. Yabụ, warara ahụ ga - eme ka agba agba ike kawanye na akara T.
1. Kaadị Ule
2. Mkpụrụ Ọbara Ọbara
3. Ọbara Ọbara
4. Buffer bọlbụ
1. Chekwaa ngwungwu ngwaahịa na ọnọdụ okpomọkụ 2-30 ° C ma ọ bụ 38-86 Celsius F, ma zere ikpughe na ìhè anyanwụ. Kit ahụ kwụsiri ike n'ime ụbọchị njedebe nke edepụtara na aha ahụ.
2. Ozugbo emepere akpa mpempe aluminom, kaadị nnwale dị n'ime kwesịrị iji n'ime otu elekere. Exposurenọ na-ekpughere oge na-ekpo ọkụ ma nwee iru mmiri nwere ike ibute nsonaazụ na-ezighi ezi.
3. A na-ebipụta nọmba nza ahụ na ụbọchị mmebi na akara ngosi.
Amụma na ịdọ aka ná ntị
1. Jiri nlezianya gụọ ntuziaka maka iji ngwaahịa a.
2. Ngwaahịa a bụ maka nnwale onwe nke ndị ọrụ na-abụghị ndị ọkachamara ma ọ bụ iji ọrụ ọkachamara.
3. Ngwaahịa a metụtara ọbara dum, ọbara, na plasma. Iji ụdị nlele ndị ọzọ nwere ike ibute nsonaazụ nnwale na-ezighi ezi ma ọ bụ nke na-enweghị isi.
4. Biko gbaa mbọ hụ na atụnyela ezigbo ihe nlele maka ule. Nnukwu ma ọ bụ obere ntakịrị ihe atụ nwere ike ibute nsonaazụ na-ezighi ezi.
5. Ọ bụrụ na akara ule ma ọ bụ akara nchịkwa si na windo ule ahụ, ejila kaadị ule. Nsonaazụ nnwale ahụ abaghị uru ma weghachite ihe nlele ahụ na nke ọzọ.
6. Ngwaahịa a bụ disposable. EGUEghari ihe eji eme ihe.
7. Kpofu ihe eji eme ihe, ihe nlere, na ihe ndi ozo dika ihe ogwu aru ike n’okpuru iwu di nkpa.
Nke gara aga: Colloidal Gold Immunoassay nyocha
Osote: Akwụkwọ akụkọ Coronavirus (SARS-CoV-2) Multiplex Real-Time PCR Kit
COVID-19 IgM / IgG Antibody nchọpụta Kit (Colloi ...
Colloidal Gold Immunoassay nyocha
Akwụkwọ akụkọ Coronavirus (2019-nCoV) Ribonucleic Acid ...
COVID-19 Antigen Nchọpụta Nchọpụta maka Nasal Swab / ...